Lowo muzwa ocwilayo esiswini sakho kungenzeka ukuthi uvela kusiphequluli sakho. Ungabheki manje, kepha iGoogle ihlela ukukhipha i-plugin yesiphequluli ezovumela abasebenzisi ukuthi bakhethe ukuphuma ekulandelweni yi… -Google Analytics.
I-Google, ehola umhlinzeki wosesho namandla wehhashi ngemuva kwethrafikhi yewebhu ye-Google Analytics analytics ithuluzi, kuzovumela abasebenzisi ukuthi bagweme ukulandelwa yithuluzi labo.
Lokhu kuveza imibuzo eminingana nemiphumela engaba khona kuma-webmasters nabathengisi bewebhu abasebenzisa i-Google Analytics ukulandelela ithrafikhi yewebhusayithi, ikakhulukazi ukuthi ukusetshenziswa kwe-plugin kuzokuthinta kanjani ukuqoqwa kwedatha yesayithi. Lokhu kuncenga omunye umbuzo obaluleke kakhulu: kungani iGoogle ingenza lokhu lapho iGoogle Analytics ingaqoqi idatha yomuntu siqu kwasekuqaleni?
Izinto zokuqala zihlala, kuya ngokuthi yini engacatshangelwa siqu idatha. Ingabe imininingwane yakho ye-ISP nendawo okuyo kubalwa njengokungeyakho? I-Google Analytics ayiqoqi amakheli e-IP ngamanye, okusho ukuthi yonke imininingwane elandelwayo ayaziwa ngokuphelele.
Ngabe lokhu kufaka iGoogle esigabeni se ukuzenzisa okuphelele ngoba bangagcina irekhodi elingapheli lomlando wokusesha wabasebenzisi? Mhlawumbe. Umlando wosesho uvumela i-Google ukuthi ithumele leyo miphumela yokusesha eyenziwe ngendlela emangalisayo, futhi ngenkathi ikwenze kwaba lula ukuphuma kulesi sici kanye nayo Isikhungo Sobumfihlo, abazenzi ncamashi izindlela zabo zokukhangisa ngalokhu okungenzeka. Futhi kufakazelwa ukuthi iqembu lobumfihlo licele iFederal Trade Commission ukuthi vula uphenyo kuGoogle Buzz, ngakho-ke i-Google ingahle ilume kancane ngaphambili kobumfihlo.
Isiphithiphithi besilokhu sikhona voluminous futhi high profile, kodwa ukusabela kwami ​​kokuqala kwaba Ngakho? Bangaki abantu abazi ngisho ukuthi banePhrofayela ye-Google, ingasaphathwa eyokuthi bangahlela le phrofayela futhi balungise izilungiselelo zabo zobumfihlo nezintandokazi zezikhangiso zabo? Angikwazanga ukuthola ngokushesha noma iyiphi idatha enobuhlakani, kepha angakanani amaphesenti abasebenzisi bewebhu abasebenzisa i-plugin ye-AdBlock Plus yeFirefox? Cishe akukuhle ngokwanele ukukubeka ngaphandle kokuchezuka okujwayelekile.
Iphuzu lami eliyisisekelo ukuthi kubaphathi bewebhu nakubakhangisi, lokhu kuhamba kungathengisa okubhaliselwe okuningi ku- Ukukhishwa futhi I-WebTrends njengoba labo bethu abasemuva kwekhethini bafuna ukufinyelela emininingwaneni eminingi ngangokunokwenzeka. Kepha lokho kuthutha kungaba ukusabela okuguqayo emadolweni enkingeni engakabi bikho – futhi okungenzeka ingaphinde ibe khona.
Tags: Ama-AnalyticsftcI-google analyticsukukhishwaukuphumaIphrofayilizokuxhumana namuhlai-venturepadimvu
Ngo-Apr 6, i-2010 ku-9: 46 AM
I-Google Analytics isesimweni esiyingozi. Ngakolunye uhlangothi, bangabodwa - banikeza okuwukuphela kwesixazululo se-Adsense ne-Analytics emakethe. Kufanele baphoqeleke ukuthi bahlangane nanoma yimuphi umhlinzeki we-analytics. Ngakolunye uhlangothi, abakwazi ukwenza okunye ukuhlanganiswa okuhle (isb. I-Facebook Analytics yiWebtrends) ngoba bayancintisana. Lokhu kubonakala kuyisimungulu.
Ngo-Apr 6, i-2010 ku-2: i-06 PM
Ngiyethemba iWebtrends icabanga ukuthi lokhu ukwenza kwakho ukuze uthole ibhonasi eyodwa ye-helluva.
Yebo, iPat East eHanapin ibibhala lokhu ku-tweet kungekudala. Igagasi lokuqala, bese kuba yiBuzz, bese kuba ukusekelwa kweCaffiene, manje lokhu?
Kufana nokuthi bazama ukuvimba ukuthi bangabuswa ngabodwa ngokucekela phansi imikhiqizo yabo kuze kube yilapho abanye bebamba iqhaza.
Ngo-Apr 6, i-2010 ku-4: i-50 PM
Well lokhu akukuhle, ngaphandle kokuthi banendlela yokulandela abantu besebenzisa ikhodi yokuvimba. 🙂
Ngo-Apr 6, i-2010 ku-5: i-10 PM
Ngokombono wethu waseMelika wobumfihlo lokhu akwenzi mqondo, kepha ukuze iGoogle Analytics ime kahle emazweni aseYurophu (abelokhu ecela abathengisi bama-analytics balolu hlobo lokuphuma), iGoogle ingumholi. Ngokwengeziwe, lolu shintsho luvumela i-Google Analytics ukuthi isetshenziselwe amasayithi kahulumeni (njengoba ithobela imihlahlandlela ye-US goverment yobumfihlo).
Cabanga ngakho njengobuholi ngendlela ehlukile. Inomthelela kubakhangisi, kepha ngicabanga ukuthi ngokuhamba kwesikhathi, imithethonqubo yohulumeni izofinyelela kubathengisi bama-analytics abanganikeli into efana nale ndlela yokuphuma.
Ngo-Apr 7, i-2010 ku-2: i-10 PM
Iphuzu elithakazelisayo. Bengingazange ngicabange ngezimakethe zaseYurophu. Siyabonga ngokuqondisisa.